May | 2017 | Radio Himilo
Dhageyso: Barnaamijka Martida Ramadaanka 31 05 17
radio himilo May 31, 2017	Idaacadda Himilo Leave a comment 53 Views
Martida Ramadaanka waa barnaamij bulshada soomaaliyeed aan ugu soo gudbino macluumaad bishan barakaysan ku qotoma. Sida warbixin quseysa bishan, dhacdooyinkii Islaamka ee taariikhda galay iyo xubinta Qurbe oo aan ku eegi doono habka ay u soomaan bishan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee qurbaha ku ...
radio himilo May 31, 2017	Features, Wararka Leave a comment 65 Views
Muqdisho – Waalidiinta dhibane lagu toogtay New Hampshire kaliya maysan cafin ninkii dilay cunugooda, hayeeshe waxay sidoo kale ugu deeqeen inay ka caawiyaan bilaabashada noloshiisa cusub. Christopher Bazar waxaa laga dhaafay muddo-xiliyeedka uga dhiman xabsigiisa uu ku galay toogashada saaxiibkiisa rumaad, ...
radio himilo May 31, 2017	Features, Wararka Leave a comment 60 Views
Muqdisho – Aabo cafiyay dilaaga inankeeda ayaa qoray buug ku saabsan habka bogsashada ee ku saabsan sheekadiisa qiirada leh. Wiilka Azim Khamisa oo lagu magacaabo Tariq waxaa la toogtay 17 sano kahor isaga oo adeeg cunto fudud ka kooban u ...
Goolhayaha Arsenal Petr Cech oo markii 11aad ku guuleystay abaal-marinta Czech Republic Golden Ball
radio himilo May 31, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 52 Views
Muqdisho – Goolhayaha Arsenal, Petr Cech ayaa la guddoonsiiyay abaal-marinta Czech Republic Golden Ball award xagaaga 2016-17. Waa markii 11aad inta uu ku jiro xirfaddiisa ciyaaraha kubadda cagta oo gool-haya Arsenal la abaal-mariyo biladdan – tiyoo uu Cech ka caawiyay Gunners-ka inay ...
Casillas: “Juventus waa inay la saxiixataa goolhaye Donnarumma.”
radio himilo May 31, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 61 Views
Muqdisho – Goolhayaha Real Madrid, legend Iker Casillas ayaa ugu baaqay kooxda Juventus inay la saxiixato goolhayaha Milan, Gianluigi Donnarumma – amaahna ku bixiyaan ilaa iyo inta Buffon uu ka fariisto ciyaaraha. Goolhayahan aadka usoo shaac-baxay waxay ciyaaraha waaweyn soo galay xagaagii 2015-2016 ...
Riyad oo sheegay inuu ka tagayo Leicester City.
radio himilo May 31, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 56 Views
Muqdisho – Riyad Mahrez ayaa u sheegay Leicester City inuu doonayo ka tegista naadiga. Xiddiga xulka Qaranka Algeria ayaa kooxda lagu naaneyso Foxes ka caawiyay inay ku guuleysto horyaalka PL England xagaagii 2015-2016, hayeeshe hadda wuxuu doonayaa inuu iskaga tago gegida ...
Iniesta oo wali raba inuu Barca ku dhameysto ciyaarihiisa.
radio himilo May 31, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 55 Views
Muqdisho – Xiddiga Barca, Andres Iniesta ayaa wali leh riyadiisa ah inuu ciyaaraha ku dhameysto kooxda La Liga, wuxuuse qirtay in ka tegi karo. Iniesta oo 33-jira ayaa heshiiskiisu wuxuu ku eg yahay bartamaha sanadka 2018 – mustaqbalkiisuna ma ahan mid la ...
Dhageyso: Barnaamijka Martida Ramadaanka 30 05 17
radio himilo May 30, 2017	Idaacadda Himilo Leave a comment 52 Views
Saul: “Greizman waa muhiim laakiin laacibna kama sarreeyo kooxda.”
radio himilo May 30, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 57 Views
Muqdisho – Saul ayaa qeexay muhiimadda Antoine Griezmann ugu fadhiyo Atletico Madrid, wuxuuse ku adkeystay in laacibka uusan ka sarreynin kooxda – kadib wararka isasoo taray oo laacibkan la xiriirinaya Man United. Xiddiga xulka Qaranka Faransiiska, Griezmann ayaa si weyn loola xiriirinayaa ...
Wax ka badan CAFIS aan laheyn EREYO lagu sifeeyo!
radio himilo May 30, 2017	Features, Wararka Leave a comment 75 Views
Muqdisho – Laba sano kadib markii gabadheeda si kama uu u toogtay wiil ay isku dugsi ahaayeen oo baska la saarnaa, Ady Guzman-DeJesus waxay maxkamadda kula kulantay dilaagii inanteeda, Jordyn Howe. Ady waxay sameysay arrin markii ay aragtay Howe ay ...